DOWNLOAD AIMP HO AN'NY ANDROID - ANDROID - 2019
AIMP ho an'ny Android
Google dia heverina fa ny milina fikarohana sy mahery vaika indrindra amin'ny Internet. Ny fitaovana dia manana fitaovana maro ho an'ny fikarohana mahomby, anisan'izany ny fikarohana fikarohana sary. Mety ho tena ilaina izany raha tsy manana fampahalalana ampy momba ilay zavatra ilay mpampiasa ary tsy misy afa-tsy sary iray momba ny zavatra atsy an-tanindrazana. Ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba fampiharana fikarohana iray, mampiseho an'i Google sary na sary miaraka amin'ny zavatra tadiavina.
Mandehana any amin'ny pejy voalohany Google ary tadiavo ny teny hoe "Sary" ao amin'ny zoro-havanana amin'ny farany ambony amin'ny efijery.
Ny sarimihetsika misy sarimihetsika fakantsary dia ho hita ao amin'ny adiresy bar. Click it.
Raha manana rohy mankany amin'ny sary iray izay hita ao amin'ny Internet ianao, dia alefaso ao anatin'ny tsipika (tokony haseho ny tabilao "Ampidiro ny rohy") ary tsindrio ny "Search by image".
Ho hitanao ny lisitry ny valiny mifandraika amin'ity sary ity. Mandeha amin'ireo pejy hita eto, afaka mahita ny vaovao ilaina momba ilay zavatra ianao.
Fampahalalana mahasoa: Ahoana ny fampiasana fikarohana Google
Raha toa ka eo amin'ny solosainao ny sary dia tsindrio ny "Fichier Upload" ary tsindrio ny bokotra fanalahidy. Raha vantany vao navoaka ilay sary, dia azonao avy hatrany ny valin'ny fikarohana!
Jereo koa: Ahoana ny fikarohana ny sary ao Yandex
Ao amin'ity boky ity dia hitanao fa tsotra ny fanalahidin'ny fikarohana amin'ny sary ao amin'ny Google! Io endri-javatra io dia hahomby tokoa ny fikarohana.